लिफ्टिङ विधिबाट पाथीभरा मन्दिरमा पानी लगिँदै! - ParyatanBazar.com
लिफ्टिङ विधिबाट पाथीभरा मन्दिरमा पानी लगिँदै!
साउन २२,ताप्लेजुङ – हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पाथीभरा ३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइमा छ । वार्षिक हजारौंको संख्यामा तीर्थयात्री जाने गरेको पाथीभरामा पर्याप्त पानी छैन । केवल आफ्नो शरीर माव त्रै पुर्याउन त हम्मे हम्मे पर्ने पाथीभरामा तीर्थयात्री स्वयंले पानी बोकेर लानु पर्ने बाध्यता छ ।